Golaha baalamaanka Hirshabeelle oo qaadanaya talo culus uu soo jeediyay Waare | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Golaha baalamaanka Hirshabeelle oo qaadanaya talo culus uu soo jeediyay Waare
Golaha baalamaanka Hirshabeelle oo qaadanaya talo culus uu soo jeediyay Waare
Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa horaantii bishaan wareysi uu bixiyay waxa uu uga hadlay dhibaatada heysata Dowlad Goboleedkaas oo ay ugu weyn tahay waqtiga doorashada oo ku beegan Doorashada Dowladda Federaalka.
Baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa maanta damacsan in sanad dheeraad ah ugu daro maamulka cusub ee 11-ka November 2020 loo doortay Madaxweynaha & ku xigeenkiisa.
Qaar kamid ah Xildhibaannada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa qaba aragtida Waare ee ah in culeys maamul ay sababtay in had iyo jeer waqti ahaan dhismaha maamulkaas uu kusoo beegmo waqti la isu diyaarinayo doorashada DFS.
“Go’aanka Baarlamaanka ayaa iska leh, balse Xildhibaanno badan ayaa aaminsan in sanad laga durjiyo waqtiga doorashada Dowlad Goboleedka, maadaama culeys badan uu ka yimid isu diyaarinta doorashada federaalka, sidaas awgeed maanta waxa aan wadnaa soo jeedin ah in sanad aan kordhiyo muddo xileedka DG Hir-Shabeelle”. Sidaasi waxaa yiri qaar kamid ah Xildhibaannada qaar.
Si kastaba, Maxamed Cabdi Waare ayaa horaantii November 2020 sheegay in haddii la doonayo in la dhiso maamul si wanaagsan looga fakiray in la kala qaado waqtiga doorashada Federaalka & maamulkaas oo isku beegan.